" အိန္ဒိယမင်းသမီး Alia Bhatt ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Gangubai Kathiawadiဇာတ်ကားက ပုံရိပ်တချို့ကိုအမိုက်စား PhotoShootတွေနဲ့ဖန်တီးပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် Dee'' - Cele Gabar
By KoePosted on May 23, 2022
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ Dee ကတော့The Model Academy (2019 )first Runner Up ဆု
ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ယောကျာ်းပရိသတ်တေဇ်သာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံအာပေးမှုကို​ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ မျက်နှာထားအကုန်လုံးဟာ တကယ့်ကိုနိုင်ငံကျော်မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ရဲ့အရည်အသွေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Dee ကတော့Photoshootတွေကိုလည်း အများနဲ့မတူအောင်ဖန်တီးရိုက်ကူးတတ်သူလေးပါ။
လက်ရှိမှာလည်း”Gangubai Kathiawadi ကားကြည့်တုန်း ဒီအခန်းလေး ရိုက်ချင်တယ်ပြောလို့ Niki Roy က ဒီတေး စီစဉ် Si Thu Kyi Yan က လိမ်းခွဲ Aw Ya Tha Soe က ရိုက်ချပေးထားပါတယ်
ဝတ်စုံကတော့ Karambir – Indian Fashion Collection ကပါ ….အားလုံးလဲ Ganguu ရဲ့ Look လေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျလိမ့်မယ်လည်း ထင်ပါတယ်. Dee တို့တွေလည်း Ganguu တို့လို Prostitute တွေကို လူတွေထဲကလူတွေအနေနဲ့ ဆက်ဆံပြီး သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုလေးတွေကို လက်ခံလိုက်ကြရအောင်နော်.🤍”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယမင်းသမီး Alia Bhatt ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Gangubai Kathiawadi ဇာတ်ကားကပုံရိပ်လေးတွေကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
အမြဲဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့ photoshootတွေကိုရိုက်ကူးတတ်တဲ့Deeကတော့ အခုလိုအမိုက်စားရိုက်ကူးမှုမှာဆိုရင်လည်း တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံလေးတွေ ထွက်ရှိလာခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းDeeရဲ့ Gangubai ဇာတ်ရုပ် ပုံရိပ်တွေကိူသဘောကျရင်တစ်ခုခုပြောခဲ့ပါဦးနော်။
” အိႏၵိယမင္းသမီး Alia Bhatt ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ Gangubai Kathiawadiဇာတ္ကားက ပုံရိပ္တခ်ိဳ႕ကိုအမိုက္စား PhotoShootေတြနဲ႔ဖန္တီးပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ Dee”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ Dee ကေတာ့The Model Academy (2019 )first Runner Up ဆု
ကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေယာက်ာ္းပရိသတ္ေတဇ္သာမက မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ဝန္းရံအာေပးမႈကို​ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးပါ။ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားနဲ႔ မ်က္ႏွာထားအကုန္လုံးဟာ တကယ့္ကိုႏိုင္ငံေက်ာ္ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အေသြးေတြပို
င္ဆိုင္ထားတဲ့Dee ကေတာ့Photoshootေတြကိုလည္း အမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ဖန္တီး႐ိုက္ကူးတတ္သူေလးပါ။
လက္ရွိမွာလည္း”Gangubai Kathiawadi ကားၾကည့္တုန္း ဒီအခန္းေလး ႐ိုက္ခ်င္တယ္ေျပာလို႔ Niki Roy က ဒီေတး စီစဥ္ Si Thu Kyi Yan က လိမ္းခြဲ Aw Ya Tha Soe က ႐ိုက္ခ်ေပးထားပါတယ္
ဝတ္စုံကေတာ့ Karambir – Indian Fashion Collection ကပါ ….အားလုံးလဲ Ganguu ရဲ႕ Look ေလးကိုၾကည့္ၿပီးသေဘာက်လိမ့္မယ္လည္း ထင္ပါတယ္. Dee တို႔ေတြလည္း Ganguu တို႔လို Prostitute ေတြကို လူေတြထဲကလူေတြအေနနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈေလးေတြကို လက္ခံလိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္.🤍”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာေရပန္းစားခဲ့တဲ့ အိႏၵိယမင္းသမီး Alia Bhatt ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ Gangubai Kathiawadi ဇာတ္ကားကပုံရိပ္ေလးေတြကို ပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးခဲ့တာပါ။
အၿမဲဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြနဲ႔ photoshootေတြကို႐ိုက္ကူးတတ္တဲ့Deeကေတာ့ အခုလိုအမိုက္စား႐ိုက္ကူးမႈမွာဆိုရင္လည္း တကယ္ကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ပုံေလးေတြ ထြက္ရွိလာခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္းDeeရဲ႕ Gangubai ဇာတ္႐ုပ္ ပုံရိပ္ေတြကိူသေဘာက်ရင္တစ္ခုခုေျပာခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post “အလှအပရေးရာပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ပင်ကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကိုပဲ သဘောကျကြောင်း ခံယူချက်လေးကို ပြောပြလာတဲ့ မေနွယ်ထွန်း”
Next post “ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးမွေးနေ့ကိုသတိတရနဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလာခဲ့တဲ့အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်”